VaMadzore Votadziswa Kubvisa Mari yeChibatiso neHurumende
Chivabvu 06, 2013
HARARE — Mukuru wevechidiki muMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Va Solomon Madzore, vacharamba vari mujeri mushure mekunge hurumende yashandisa chikamu 121 chemutemo we Criminal Procedure and Evidence Act kuti vasabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
VaMadzore vachagara mujeri kwemazuva manomwe vakamirira kuti hurumende ikwidze nyaya iyi kudare repamusoro zvichitevera kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kwavanga vaitwa nemutongi wedare, Va Elisha Chingano.
Gweta raVaMadzore, VaCharles Kwaramba, vanoti vaudza dare kuti VaMadzore munhu anokodzera kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vasiri kutiza pane imwe mhosva yavakatarisana nayo yakakura kwazvo yavari kupomerwa yekuponda mupurisa, VaPetros Mutedza, iyo ichiri mumatare.
VaKwaramba vati VaMadzore vakatombokumbira pasipoti yavo kudare vakaenda ku Netherlands nekuDenmark vakadzoka vachiidzosera kudare uye vati izvi zvinoratidza kuti munhu anomirira kuzotongwa kana vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya yavave kupomerwa iye zvino.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi, VaMunyaradzi Mataranyika, vati VaMadzore munhu anogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekubhara mari yechibatiso.
Zvisinei, mutongi wedare, VaElisha Chingano, vati VaMadzore vabhadhare zana remadhora semari yechibatiso. Asi Va Mataranyika vazoshandisa chikamu che 121 chemutemo we Criminal Procedure and Evidence Act kuti VaMadzore vasabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso sezvanga zvaturwa nedare.
VaKwaramba vati chikamu ichi chiri kuramba chichishandiswa zvisiri izvo nehurumende mukutyora kodzero dzevasungwa vanenge vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatsio nematare.
VaMadzore vakasungwa neChina muHarare svondo rapera vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti idhongi rinokamhina pamusangano wakaitwa naivo VaMadzore nenhengo dzeMDC-T ku Mbire mudunhu re Mashonaland Central.
Asi VaMadzore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.